Tselatra Namono Wiwa 11 Tao Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2014 9:21 GMT
Tanàna kely indizeny ao Sierra Nevada, sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Sailing Nomad (CC by 2.0).
Olona Wiwa teo amin'ny am-polony teo no namoy ny ainy raha namely an'i Sierra Nevada any Santa Marta ny tselatra tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, tamin'ny 6 Oktobra 2014. Am-polony ihany koa ireo naratra. Naneho hevitra ahitana firaisankina sy fanehoan-kevitra politika mikasika ity loza ity ireo mpisera Twitter.
Nahatsiaro i Karina Beatriz fa avy be ny orana ny alin'ny 6 Oktobra, ary naneho fampiononana noho ireo aina nafoy izy:
Mazava loatra fa noho iny oram-baratra mampatahotra omaly iny, hamindra fo amintsika anie Andriamanitra ary hionona anie ireo fianakaviana Wiwa ao Sierra Nevada.
Etsy andaniny, ny SuperGirlDidi dia nanararaotra nanesoeso ny filoha teo aloha Álvaro Uribe Vélez, izay nanome tsiny azy noho ireo olana tsy voavahany:
Tanàna nentim-paharazana ao Sierra Nevada an'i Santa Marta, sary avy amin'ilay mpisera Flickr, Sailing Nomad (BY-NC-ND 2.0).
Angamba i Uribe no nahatonga ny tselatra mba hamonoana ireo vahoaka indizeny ao Sierra Nevada, noho ny fitsikeran'ny vahoaka azy hatrany.
Nanontany momba ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao mikasika ny loza i Colores Mari:
Mikasika ireo vahoaka indizeny namoy ny ainy tao Sierra Nevada, mpanoratra gazety iray nilaza tao amin'ny @NoticiasCaracol nilaza fa “hahazo ny fandevenana Kristianina izy ireo.” Ahiahy diso fipetraka.
Diana Montoya, kosa nankasitraka ny fahendren'ny fokonolona Wiwa:
Mampalahelo izany tantara mahazo ny Wiwa ao Sierra Nevada izany. Fahaverezan'aina sy fahendrena .
Miorina ao amin'ny ranomasin'i Karaiba, monina ao Sierra Nevada an'i Santa Marta, izay fantatra ao an-toerana ho toy ny “Afovoan'izao Tontolo Izao” ny fiarahamonina Wiwa. Ahitana tanàna kely 4 mifanolo-borindrina ihany koa ao araka ny filazan'ny bilaogy Pueblo Wiwa (Vahoaka Wiwa), izay mamoaka lahatsoratra momba ny fiarahamonina, izay voalaza fa iharan'ny teritery ara-zon'Olombelona nandritra ny ady Kolombiana.